AMBATOFINANDRAHANA - RAIKITRA NY FIFANDONANA : Olona roa maty voatifitry ny jiolahy
Olona roa no maty voatifitry ny jiolahy, nandritra ny fifandonana teo amin’ny fokonolona nanao ny fanarahan-dia sy ny jiolahy avy nanafika. 21 décembre 2016
Tao amin’ny Fokontany Antsenjabe, Kaominina Amborompotsy, Distrikan’Ambatofinandrahana, Faritra Amoron’i Mania, no nitrangan’izany fanafihana izany, ny zoma lasa teo, tokony ho tamin’ny 10 ora alina.
Araka ny fanazavana voaray avy amin’ny mpitandro ny filaminana dia jiolahy manodidina ny efapolo mahery nirongo basy sy fitaovam-piadiana tsotra no nangalatra omby 100 mahery tao amin’io Fokontany voalaza io. Niatsianana ny dian’omby.
Nanao ny fanarahan-dia ny fokonolona sy ny mpitandro ny filaminana, ka nisy ny fifandonana teo amin’ny roa tonta. Vokany, olona roa tamin’ny fokonolona nanao ny fanarahan-dia no maty voatifitry ny jiolahy.
Mbola nanohy ny fanarahan-dia ny fokonolona ary rehefa nandre ny Zandary avy ao amin’ny borigadin’Amborompotsy dia namonjy nivantana tany an-toerana, ka nanao ny fiambenana ny kizo.
Sarona ilay mpamily nitsoaka sady mamo nandona moto nanao taingin-telo ALASORA (99) 16 octobre 2020 Nitombo iray indray ireo sekoly tsy miankina nikatona mba hiarovana ireo kilonga ANTSIRANANA (78) 16 octobre 2020 Mpiambina sivily iray nigadra, roa hafa navotsotra ZAZAVAVIKELY ROA VOAOLANA TENY IVATO (76) 19 octobre 2020 Mpanendaka gaigilahy roa nidoboka am-ponja eny Antanimora ASAN-JIOLAHY ENY ISOTRY (61) 16 octobre 2020 Nasaina nitatitra ny asa vitany ireo Governora 18 efa voatendry FILAN-KEVITRA TANY ANTSOHIHY (53) 16 octobre 2020 “Mahalany potika plastika 125g isam-bolana ny mpanjifa hazan-dranomasina ” FAKO (53) 19 octobre 2020